ကောင်းကင်ဘုံသည် TV7 ဆွီဒင်မှနျလှုံ့ဆျော | Apg29
574 online! | Sidvisningar idag:7234 | Igår: 149 115 |
ကောင်းကင်ဘုံသည် TV7 ဆွီဒင်မှနျလှုံ့ဆျော
အီစတာတနင်္ဂနွေ5နှစ်ယခုအချိန်အထိဖင်လန်နိုင်ငံ Helsinki မိဘအဖှဲ့အစညျးနှငျ့စတူဒီယိုနှင့်ရုံး shared ထားပြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ရာကောင်းကင်ဘုံသည် TV7 ။ အခုတော့ channel ကိုကောင်းကင်ဘုံ TV7 ကျဆင်း ယူ. Uppsala, ဆွီဒင်၌ထ setting!
- Uppsala အတွက်ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယိုနှင့်အတူငါတို့သည်ရှည်လျားလုပ်ဖို့လိုတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ကိုထုတ်လုပ်မှုချဲ့ထွင်နိုင်, ရုပ်သံလိုင်းအကြီးအကဲကပြောပါတယ် Daniela Persin ။
- သစ်ကိုအဆောက်အဦများအတွက်စာချုပ် channel ကိုရဲ့စတုတ္ထမွေးနေ့အပေါ်အင်အားသုံးထဲသို့ဝင်ရကြလိမ့်မည်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းကစတင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒီကဆြုံးသစ်ကိုတည်နေရာမှာစစ်ဆင်ရေးစတင်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ထား။ ထိုအချိန်ဇယားလာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းထွက်စာလုံးပေါင်း။
- ကျွန်တော်တို့ရဲ့စပီနှင့်ကြည့်ရှုအများစုမှပိုမိုနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဖင်လန်နှင့်အထူးသဖြင့်ဆွီဒင်ဖင်လန်, သဘာဝကျကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ဧရိယာဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဆွီဒင်အတွက်တည်ထောင်ခြင်းသည်အဘယ်သူ၏စီးပွားရေးကိုအလှူငွေအပေါ်တွင်အခြေခံထားပါသည် channel ကိုအဘို့ကြီးစွာသောအပိုအားထုတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
- ငါတို့သည်ဤ၌ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ tajmningar နှစ်ဦးစလုံးကြုံတွေ့ခဲ့ကြ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ချန်နယ်နှစ်ဦးစလုံးအသစ်အဟောင်းမိတ်ဆွေများကယုံကြည်ကြသည်ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နိုင်သောစေရန်အပိုဆောင်းလက်ဆောင်တွေထိုးသွင်းဖို့လိုလား, Daniela Persin ကပြောပါတယ်။
- ကျနော်တို့ညာဘက်ဆင်းသက်ဖို့bönestödနှင့်ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကိုနှစ်ဦးစလုံးလိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သကြပါပြီ ဆွီဒင်အတွက်တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်အထူးထောက်ခံမှုသက်တမ်းထပ်တိုးဖွင့်လှစ် ပါကကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာတက်သည်လက်မှတ်ထိုးရန်လွယ်ကူသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်များ, ဧဝံဂေလိတရားကို, သမ်မာကမျြးသင်ကြားမှုအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးသတင်းများဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ရုပ်သံလိုင်း၏ရူပါရုံနှင့်မည်ကဲ့သို့သောဗျာဒိတ်ရူပါရုံကို၏ပထမငါးနှစ်သဘောပေါက်အကြောင်းပိုမိုနားထောငျကွ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငါးနှစ်နှစ်ပတ်လည်နေ့အစီအစဉ်ကို "ချန်နယ် / ကောင်းကင်ဘုံ TV7 နှင့်အတူ5နှစ်ခရီးသွား" ရရှိနိုင်ပါ ဒီမှာ Play ကို TV ပေါ်မှာ။
ကောင်းကင်ဘုံသည် TV7 app ကို, ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်မှတဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်တဲ့ဆွီဒင် allkristen တီဗီရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းနာရီပတ်ပတ်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Play ကို TV ပေါ်မှာ app များကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်း၌တည်ရှိ၏ ကောင်းကင်ဘုံ TV7 မီဒီယာ ဆွီဒင်, ဖင်လန်, Estonian အဘိဓါန်နှင့်ရုရှား: လေးဘာသာစကားများဖြင့်ငါးလိုင်းများလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာ။ မီဒီယာအိမ်သူအိမ်သားဟယ်လ်စင်ကီအတွက်၎င်း၏ဌာနချုပ်ရှိတယ်။
ဒီ app "ကောင်းကင်ဘုံ TV7" Play App Store မှာနှင့် Google ကနေအခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကြည့်ရန် ဒီနေရာကိုက်ဘ်တီဗီ နှင့် ဤနေရာတွင်တီဗီ Play ။ Apple ကတီဗီသို့မဟုတ် Chromecast ကို TV ပေါ်မှာပရိုဂရမ်သို့ရဖို့။ ဒီမှာရုပ်သံလိုင်းသေချာစေရန်ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ ။
ပြောင်းရွှေ့ Uppsala အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များငှားရမ်းတိုက်ခန်းများရှာနေအတူ။ အကြှနျုပျကိုရ Christer Åberg, (ကျေးဇူးပြုပြီးသင်သည်မည်သည့်၏သိလား Christer Åberg@apg29.nu , 070-935 66 96 ), ဒါကြောင့်ငါအဆက်အသွယ်အပေါ်လွန်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါမလိုချင်တဲ့ - အပိုင်း 18
ငါ၏အကလေးဘဝအကြောင်းကိုငါ့အအမှတ်စဉ်၏ 18 အစိတ်အပိုင်း။ ငါသတ္တမတန်းအတွက်စတင်သောအခါအကျွန်ုပ်တို့သည်အထက်တန်းကျောင်းမှလာကြပြီ။ ဤအပိုငျးကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အခါသူကငါ့အဘို့ပွုတျောမူသော, သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာအမှန်တကယ်သာတစ်စုံတစ်ဦးကခရစ်ယာန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်မပါလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ပြဿနာလိုအပ်သည့်အခါရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ 12 မေးခွန်းများကိုအများစုဟာဖြေဆိုရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်, စလုံးဝထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
Vecka 04, onsdag 23 januari 2019 kl. 00:47
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 464 927 674 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 131 bloggartiklar, 93 342 kommentarer och 61 360 bönämnen.